ကျဆုံး သွားတဲ့ ကချင် တိုင်းရင်းသားလေး ထီဆန်ဝမ်ဖီ အတွက် အလှူငွေ နဲ့ အတူ တတ်နိုင် သလောက် ဖေးမကူညီခဲ့တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကျဆုံး သွားတဲ့ ကချင် တိုင်းရင်းသားလေး ထီဆန်ဝမ်ဖီ အတွက် အလှူငွေ နဲ့ အတူ တတ်နိုင် သလောက် ဖေးမကူညီခဲ့တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း
ကျဆုံး သွားတဲ့ ကချင် တိုင်းရင်းသားလေး ထီဆန်ဝမ်ဖီ အတွက် အလှူငွေ နဲ့ အတူ တတ်နိုင် သလောက် ဖေးမကူညီခဲ့တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အသံချိုချိုလေး နဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေ သီဆိုတတ်ပြီး အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ် အချစ်တွေကို အခိုင်အမာရရှိထားသူကတော့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်းနဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းတို့ရဲ့ ညီမအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းကတော့ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲ အတွင်း လမ်းပေါ်ထွက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ခွန်အားအပြည့်နဲ့ အားကြိုးမာန်တတ်ပါဝင်နေသလို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလည်း အကောင်းဆုံးပါဝင်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကတည်းက လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျအားတတ်သရော လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်းက ကျဆုံးသွားတဲ့ အသက်(၁၉)နှစ်အရွယ် ကချင်တိုင်းရင်းသားလေး ထီဆန်ဝမ်ဖီ (ခ) ဖီထွန်း အတွက်လည်း အလှူငွေတွေလှူဒါန်းပြီး ဖေးမကူညီခဲ့ပါတယ်..။ “လူညီရင် အရှေ့ထွက်တိုက်လို့ရပြီ”လို့ ပြောပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ပါးကိုထိမှန် ကျဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီး တစ်ခြားသူတွေကို ထိမှာစိုးလို့ သူ့ကိုပစ် သူ့ကိုပစ်ဆိုပြီး ရဲရင့်လှစွာနဲ့ သူ့အသက်ကိုစတေးပြီး အခြား လူတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ အာဇာနည်သူရဲကောင်းလေး ဖီထွန်းအတွက် ဆွိဝတ်ရည်သောင်းက အလှူငွေတွေနဲ့ ဖေးမကူညီခဲ့တာပါ..။
“မောင်လေး Phi Tun အတွက် ကိုယ်တတ်နိုင် သလောက်လေး သွားလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အကူငွေထည့် တာတောင် လက်မခံဘူး ။ သူ့အကိုလက်ထဲအတင်းထည့်ပေးခဲ့ရတယ် ။ တစ်ကယ်ရိုးသားလွန်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားလေးတွေပါ …. RIP ပါ မောင်လေး Phi Tun ရေ..” ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြထားတာပါ..။ ယူကြုံးမရစွာနဲ့ ဝမ်းနည်းစကားလေးပြောရင်း အလှူငွေတွေလှူခဲ့တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းရဲ့ အလှူလေးကိုလည်းသာဓုခေါ်ကာ ကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းလေးအတွက်လည်း ပရိသတ်တွေက ဆုတောင်းပေးထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. အသံခ်ိဳခ်ိဳေလး နဲ႔ သီခ်င္းေကာင္းေလးေတြ သီဆိုတတ္ၿပီး အႏုပညာေလာကမွာ ပရိသတ္ အခ်စ္ေတြကို အခိုင္အမာရရွိထားသူကေတာ့ ႏွင္းဝတ္ရည္ေသာင္းနဲ႔ ေအးဝတ္ရည္ေသာင္းတို႔ရဲ႕ ညီမအငယ္ဆုံးေလးျဖစ္တဲ့ ဆြိဝတ္ရည္ေသာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ ဆြိဝတ္ရည္ေသာင္းကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲ အတြင္း လမ္းေပၚထြက္လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ခြန္အားအျပည့္နဲ႔ အားႀကိဳးမာန္တတ္ပါဝင္ေနသလို တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေနလည္း အေကာင္းဆုံးပါဝင္ေနသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္..။
ေဖေဖာ္ဝါရီလအစပိုင္းကတည္းက လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကို ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က်အားတတ္သေရာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဆြိဝတ္ရည္ေသာင္းကေတာ့ သဃၤန္းကြၽန္းက က်ဆုံးသြားတဲ့ အသက္(၁၉)ႏွစ္အ႐ြယ္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေလး ထီဆန္ဝမ္ဖီ (ခ) ဖီထြန္း အတြက္လည္း အလႉေငြေတြလႉဒါန္းၿပီး ေဖးမကူညီခဲ့ပါတယ္..။ “လူညီရင္ အေရွ႕ထြက္တိုက္လို႔ရၿပီ”လို႔ ေျပာၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ပါးကိုထိမွန္ က်ဆုံးသြားတာျဖစ္ၿပီး တစ္ျခားသူေတြကို ထိမွာစိုးလို႔ သူ႔ကိုပစ္ သူ႔ကိုပစ္ဆိုၿပီး ရဲရင့္လွစြာနဲ႔ သူ႔အသက္ကိုစေတးၿပီး အျခား လူေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးကာကြယ္ေပးခဲ့တဲ့ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းေလး ဖီထြန္းအတြက္ ဆြိဝတ္ရည္ေသာင္းက အလႉေငြေတြနဲ႔ ေဖးမကူညီခဲ့တာပါ..။
“ေမာင္ေလး Phi Tun အတြက္ ကိုယ္တတ္ႏိုင္ သေလာက္ေလး သြားလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အကူေငြထည့္ တာေတာင္ လက္မခံဘူး ။ သူ႔အကိုလက္ထဲအတင္းထည့္ေပးခဲ့ရတယ္ ။ တစ္ကယ္႐ိုးသားလြန္းတဲ့ တိုင္းရင္းသားေလးေတြပါ …. RIP ပါ ေမာင္ေလး Phi Tun ေရ..” ဆိုၿပီး စိတ္မေကာင္းစြာ ေျပာျပထားတာပါ..။ ယူႀကဳံးမရစြာနဲ႔ ဝမ္းနည္းစကားေလးေျပာရင္း အလႉေငြေတြလႉခဲ့တဲ့ ဆြိဝတ္ရည္ေသာင္းရဲ႕ အလႉေလးကိုလည္းသာဓုေခၚကာ က်ဆုံးသြားတဲ့သူရဲေကာင္းေလးအတြက္လည္း ပရိသတ္ေတြက ဆုေတာင္းေပးထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္..။
Previous post လူသား တို့ ကြုံ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဆိုး ဆုံး ကပ် ရောဂါကြီး (၁၀) ခု
Next post သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို အား မြန်မာ ရုပ်ရှင် အသိုင်း အဝိုင်း မှ ပထမ အကြိမ်သတိပေး နှိုးဆော်ခြင်း…..